Inkxaso yobuGcisa-Chengdu Action Electronics Joint-Stock Co., Ltd.
Ngesixhobo soluvo njengetekhnoloji engundoqo, i-ACTION iyakwazi ukubonelela ngenkxaso yobuchwephesha ejikeleze yonke imveliso kunye neemfuno ezahlukeneyo zomthengi we-OEM/ODM ukukunceda ukuba ulungele imarike yendawo.
Iimveliso ze-ACTION kunye nezisombululo ezisetyenziswa ngokubanzi kumakhulu amazwe kunye nemimandla, ehlanganiswe ngaphezu kwamasimi angama-20, i-Petroleum, ikhemikhali, i-pharmaceuticals, i-metallurgy, imigodi, isinyithi, izityalo ezikhethekileyo zoshishino, amagumbi e-boiler yegesi, izikhululo zokuzalisa igesi, izikhululo zokulawula uxinzelelo, umbhobho odibeneyo wasezidolophini. iipaseji, igesi yasezidolophini, indlu, iindawo zokuhlala kunye nezorhwebo, njl. Zonke iimveliso zayo ziluphumelele uvavanyo yi-China National Supervision and Test Centre for Fire Electronic Product Quality.Ukongeza, i-ACTION ifumene iSatifikethi sokuVunywa koHlobo oluvela kwiKomidi yeSiqinisekiso seMveliso yoMlilo yaseTshayina kunye neSatifikethi se-CMC kwi-Bureau yoMgangatho woBugcisa.Uninzi lweemveliso zifumene isatifikethi se-CE.
Njengenkampani enoxanduva kunye neminyaka eyi-23 yamava e-alamu yegesi, i-ACTION ixabisa kakhulu iqabane, kwaye izimisele ukukhula kunye neqabane lethu kunye kwixesha elide ukuze libe nenzuzo efanayo.Unokufumana eyona nkqubo yexabiso, inkxaso yobugcisa, emva kwenkonzo ngoqeqesho lwe-intanethi kunye noqeqesho lwefektri njalo njalo.
Sijonge abasasazi basekhaya kwihlabathi liphela!Wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi ngokukhululekileyo.
IAlam yerhasi etshayo, umtshini wegesi osisigxina, Isikhangeli segesi se-lpg, isixhobo segesi, umtshini wegesi onokutsha, China Gas Detector,